အဆိုအရ စာမျက်နှာခြောက်, Sanchez sentafriendaphotograph of Bezos’ genitalia which he had sent her along with other messages which included him telling her he loved her and that he wanted to ‘breathe her in’.
The friend slipped the messages to အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Enquirer and that it was triggered its exhaustive, four month investigation into the pair’s romance, according to the source.
According to sources cited by both the Enquirer and အမေရိကန်အပတ်စဉ်, Sanchez’s husband Brian was stunned by the revelation.
‘We can from nothing,’ Sanchez told ဟောလိဝုဒ်သတင်းထောက် in 2017. ‘I used to sleep in the back of my grandmother’s car when she would go clean houses.’
‘Matt and Ben don’t get to see each other often, so we sat them together,’ Sanchez told လူပုဂၢဳိလ္မ်ား at the time, referring to Matt Damon and Ben Affleck.
(စုစုပေါင်းအမြင်များ: အချိန် 57, တစ်နေ့လျှင် 1 လည်ပတ်မှု)
Lara Trump တိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေးကိုရန်ပုံငွေပွဲများအတွက်အထူးဧည့်သည်အဖြစ်ပုံပေါ်ပါလိမ့်မယ်
Solar up early for China with 1st Asian Video games gold medal
ရိုမန်းတစ်နွေရာသီလှပသောဆင်မြန်း: 22 ဓာတ်ပုံကို (17)
အလှဆုံးမိန်းကလေးများအမေရိကန် (49 ဓာတ်ပုံများ) မဟုတ် (14)
Demi နာမည်ကျော်များအတွက်သတ္တုရေကူးဝတ်စုံနဲ့ထ ... (11)